Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Uhlaziyo olutsha: Isikhokelo sokubukela iminenga yaseCanada esihlawulelwe i $ 10,000
Isikhokelo sokubukela iminenga esiseCampbell sahlawuliswa i-10,000, XNUMX yeedola phantsi komThetho weeNgozi zoMngcipheko ngokusondela kwiminenga yokubulala.
NgoSeptemba 13, 2021, kwiNkundla yePhondo yaseCampbell River, eBritish Columbia, eKhanada, iJaji eHloniphekileyo uR. Lamperson wafumana uNicklaus Templeman, umnini kunye nomqhubi weCampbell River Whale kunye neBear Excursions, enetyala lokwaphula umthetho phantsi kweSpecies At Risk and Federal. Ukuloba IZenzo.
UJustice Lamperson wayalela uMnu.Templeman ukuba ahlawule isohlwayo se- $ 5,000 ngolwaphulo ngalunye, ngexabiso leedola ezili-10,000 XNUMX. Ukwayalele ukuba ezi mali zisetyenziselwe ukugcinwa nokukhusela izilwanyana zaselwandle kumanzi akwiBritish Columbia.